DHAGEYSO: Sababta Ciidamada AMISOM lacagta looga jartay oo la shaaciyey Apr 27, 2016 – jawaab |
DHAGEYSO: Sababta Ciidamada AMISOM lacagta looga jartay oo la shaaciyey Apr 27, 2016 – jawaab
order Viagra Plus online cheap, purchase dapoxetine.
Michele Cervone d’urso oo Midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya ayaa ka hadlay sababaha ay ciidamada AMISOM uga jarteen %20 musharadkii ay siin jireen in ay tahay in mudo ka badan sanad ay ku wargeliyeen in ay lacagtaasi jaran doonan.
Isagoo jooga Muqdisho oo wareysi lala yeeshay ayaa daabacday wareysigiisa Jariidada The Star ee kasoo baxda dalka Kenya,ambassador Michele Cervone ayaa shaaca ka qaaday in Midowga Afrika ku wargeliyeen in ay raadsadaan cid kale oo iyaga lacagahaasi ka saacida ama siisa,waxana uu tilmaamay in lacagtaasi ay siinayaan dhinacyo kale oo ku fir fir coon dagaalka lagula jiro Al-shabab maxaa yeelay Midowga Yurub ayaa waxa u cadaatay in Al-shabab aan wali lagu jabin dagalka lagula jiro.
Michele Cervone ayaa ku faanay in ay yihiin gacanta kaliya ee taagerta AMISOM la,aantooda aan la dhisi lahayn AMISOM.
Sidaasi ay jirto ayaa waxa uu safiirka ka digay in si qaldan loo fasiro lacagta ay jarteen,waxana uu sheegay in saxiibada looga baahan yahay in la hormariyo ciidamada Soomaliya oo ay tahay waxa loo baahan yahay.
Sanad waliba Midowga Yurub ayaa bixinayay lacag dhan $200,Milion oo hadda laga jartay %20.
Askariga AMISOM ayaa qadaanaya $828 kadib marka ay xukuumadooda ka goosato $200.
Madaxa Howlgalka AMISOM Faransiiska Madero ayaa sheegay in ay raadinayaan gacan kale oo taagero maaliyadeed ay ka heli karaan sida QM in ay bixiso lacagta AMISOM.
Hoostaan ka dhageyso: